Kwaye uqaphele ukuba kunye nenkqubela yobomi bentsapho, ukubanga kuyancinci? Kutheni oku kwenzekayo? Emva koko, ukumanga phakathi kwabantu abathandanayo kuyinkqubo yokudlelana. Ndiyakwazi ukuqala ukumanga umyeni wam kwakhona, njengangoku waqala ukutshata? Xa kulindeleke ummangaliso omncinci ngaphakathi kwabo bonke bafa?
Ukumangalela indoda kuthetha ithuba lokumazi umfazi. Ekuqaleni kobudlelwane, xa kusekho "ukufikelela emzimbeni," ukumanga kubaluleke kakhulu, kuba kukunceda umntu ahlawule ukungakwazi ukufumana ngaphezulu. Xa ixesha elide elilindelekileyo lolwalamano lwenzeka, akasenasithakazelo ekumangeni kwaye yonke into ihla ukuxhatshazwa kocansi.
Abafazi ngendlela eyahlukileyo babhekisela kubanga. Kule nto into esondeleyo kunye nesondlo, kuyindlela enhle yokufumana uvuyo, ukuveza iimvakalelo zakho neemvakalelo zakho. Singabantu abathandekayo kunye nezilwanyana ezibuhlungu. Ukubambisana ngokubaluleka kubaluleke kakhulu, kungenxa yoko sifuna ukumbumbana nokumanga kakhulu.
Ubomi bentsapho bokubamba okulungileyo buba ngaphantsi nangakumbi ngenxa yokuba asiyithandi le nkqubo, kodwa ngenxa yokuphumula nokuqhubeka malunga namadoda. Ixesha lokulungisa le meko.
Into yokuqala ukuqala ngayo ukujonga emlonyeni wakho kwisibuko. Ukuba ubuyindoda, ubungathanda ukumanga loo sponge? Ziqhelanise, ziza kunye namabala ahlukahlukeneyo anokubangela umnqweno wokumanga. Yongeza ubunqunu, ubulili kwaye indoda ingowakho!
Ngokwemvelo, ukumanga umfazi omhle ohlambulukileyo nomhle. Ngoko ke, jongana nempilo yamazinyo akho, iphunga emlonyeni wakho, isikhumba sempilweni ebusweni bakho kunye nomlomo wakho. Jonga ngomlomo. Ebusika, sebenzisa umlomo ococekileyo. Susa iincinci zesikhumba ezifile nge-scrub. Masihlale benomnene kwaye bemema.
Ukuze umntu afune ukukubanga, kufuneka uqiniseke ukuba ungumnini wemilomo eyona mihle kakhulu kwaye inomdla kwihlabathi! Ungalokothi uqonde umlomo wakho okanye ubangenise kumgca omncinci. Umlomo wakho kufuneka uhlale ukhululekile, mhlawumbi i-ajar.
Jonga ngamehlo kwindoda yakho, udibe umlomo wakho, kwaye uya kuqonda ngokukhawuleza oko utshoyo. Funda ukuveza umlomo wakho ngesondo. Sebenzisa umlenze womlonyeni ukwandisa umthamo wabo uze unike isonka esincinci se-strawberry okanye ibhanana.
Ukudibanisa u kisses wakho nomyeni wakho, kwanele ukuba ufake umcabango! Khawucinge ukuba uya kumanga le ndoda okokuqala. Awazi ukuba uyayenza njani okwamanje, kwaye ufuna ukuyenza into ebalulekileyo kuye.
Ngokuhamba kwexesha, siyeke ukuzama, size siqale ukumanga ngokufanayo. Ewe, ngubani oza kuba nomnqweno wokuphinda aphinda abuye ahamba? Mangaliswe umyeni wakho ngeendlela ezintsha zokubanga. Ithenda kakhulu okanye, ngokuchaseneyo, ngokwesondo. Uya kuqonda ukuba akazi yonke into ngawe, kwaye unokumangaliswa nguye.
Funda iintlobo ezintsha zokubanga: isiFrentshi, iBrazil. Tshintsha isantya kunye nesivinini seelwimi. Ukuxhalabisa ngokunyaniseka ngexesha lokumanga. Tshela umyeni wakho uyanincoma kwaye uyamfuna. Nangona kunjalo, musa ukwenza oku xa ulwimi lwakhe lusemlonyeni wakho. Ayikwazi ukunyaniseka, kodwa ihlekisa. Kwaye ukuzibandakanya kwakho (ukulungelelaniswa kwangaphambili) kuyakuphoqa loo mntu ukuba aqale kwaye aqhubekele kwimisebenzi esebenzayo.
Funda ukucoca! Yiba ikati edlalwayo kunye nekhwele. Kuya kukukholisa umyeni wakho, kukubonise ngendlela entsha, kwaye kwakhona uqinisekise ukuba unyanzelani okwenziweyo xa etshatile.
Akuyimfuneko ukumanga kuphela emlonyeni. Emzimbeni womntu wakho kukho indawo eninzi enomdla, apho ungakangazanga. Kuthiwani nge-lobe yendlebe, isalathisi somunwe, isundu, intamo, intamo?
Indoda yayidunyiswa ngexesha lokumanga. Nangona udibana neentlanganiso ezisemthethweni, uye kwisitrato okanye uhlale kumtyelela kubazali bakho, kumana omncinci kunye namazwi ambalwa malunga nokuba "uyinkwenkwe enhle" uya kuphakamisa umntu kwizulu lesixhenxe ngokuvuya.
Yivume indoda yonke indawo kwaye rhoqo, xa ufuna kwaye xa ubona ukuba akayiqondi. Ngexesha lomsebenzi wasekhaya, imidlalo kunye nomntwana, ukubukela iTV. Ewe, naphi na! Into ephambili akuyikuyixeka xa exakeke into ebalulekileyo kwaye ibalulekile. Kulo nqaku, kunokwenzeka ukuba awuyi kukhanga kwakhona.
Zama ngokubanga. Kutheni ungenzi oku xa udla i-ayisikrimu egcobileyo okanye ususe i-candy e-sweet? Intsha, iimvakalelo ezingavamile ziqinisekisiwe kuwe!
Ubumnandi obumnandi, obumnene obunokuphefumula imvakalelo emitsha ebuhlotsheni bakho! Ungaphuthelwa eli thuba!
5 imigaqo yokuqinisa ubudlelwane
Ngaba uvelwano novelwano lufuna ubomi?
Indlela yokuphepha ukudlwengulwa?
Isaladi yaseSpain ngeetayibhile ezibhaka
Imemori yesikolo sokufunda. Sakha, siqwalasela iimpawu
Indlela yokulahla icandelo leenwele?
Indlela yokucima indlela yokuzibulala
Iingxaki kunye nokukhusela ukungabikho kwengqondo
Colic kwi-tummy yeintsana
Ungathini emehlweni akhe kuphela
I-pizza kunye nepepper ecocekileyo kunye ne-anyanisi ekhethiweyo
Isonka kunye nembewu yeempompo